Bavula iMouse yeMicrosoft ukuze bahlawule ngaphandle | Ndisuka mac
Bazilungiselele iMouse yeMicrosoft ukuze babize ngaphandle kwentambo
Kanye xa ndiqala iMac yam kwithuba eladlulayo, ndafumana isilumkiso sokuba my Mouse Magic ibhetri iphantsi. Kwaye ndingena nje kuTwitter kwaye ndizifumene ezi ndaba. Ke yayisisibonakaliso esingcwele, endisabelana nani nonke.
Injineli enobuqhetseba isandula ukuthumela kwi-akhawunti yayo ye-Twitter ividiyo yendlela eguqule ngayo iMagic Mouse yayo ukubiza ibhetri ngokufanelekileyo ngaphandle kwamacingo. Ndonqena kakhulu ukwenza njalo, ke ndicinga ngokukucela ukuba undenzele enye. Ukuhlawula, kunjalo.
Xa ndiqala iMac yam kwilixa elidlulileyo ukuqala iseshoni yomsebenzi, ndafumana isilumkiso sokuba iMagic Mouse yam ine ibhetri ephantsi. Ukuba uyilo lwegundane lika-Apple lwalunengqiqo ngakumbi kwaye lusengqiqweni, kwaye ndinesihlanganisi ngaphezulu kwesixhobo, ngoku ngendilayisha imouse kwaye ndisebenza nayo ngokungathi yiMouse yeMicingo enentambo.
Kodwa hayi. Kuvela ukuba isinxibelelanisi Umbane kusemva kwemouse, kuthintela ukusetyenziswa kwayo ngelixa ubiza. Yhini ikaka, uxolo. Ke ngoku kufuneka ndithandaze ukuba ibhetri ehlala ihleli izakundigcina ngelixa ndibhala le migca.
Ukuba ngethuba ndiyigqibile le seshini yomsebenzi kwaye ndilibale ukuyifaka imali, xa ndibuyele emsebenzini ndiza kuziqalekisa kwaye ndizithuke ndihleli phambi kweMac ndijonga iMouse yeMagic….
Indlela yokutshaja yeApple Magic Mouse 2 isisiyatha kakhulu, kwaye ngoku iguqulelwe kwishaji engenazingcingo. pic.twitter.com/XUclklvMX9
-UDuanRui (@ duanrui1205) January 23, 2021
Ndicinga ukuba injineli ekrelekrele ikhathele yile ngxaki, ikhe yadibanisa iMagic Mouse yayo yongeza Ikhoyili Ukutshaja ngaphandle kwamacingo ngaphakathi. Uyibonisa kwividiyo ethunyelwe kwiakhawunti yakhe Twitter. Ndiyathemba ukuba umntu ovela kuApple uyayibona kwaye afumane umbono.
Ndiyakuqonda ukuba ngokwasemzimbeni ngenxa yokugoba kwesixhobo kunzima ukubeka isixhobo sokukhanyisa phezulu kwimouse. Kodwa kula maxesha, sele benethuba elaneleyo lokuguqula iMouse yeMagic kunye nokubeka ikhonkco lokutshaja kuyo. sithuba ekhohlo okanye ekunene, ukuze ukwazi ukuyisebenzisa ngexesha likaxakeka ngebhetri efileyo. Sizakulinda iMac entsha, ukubona ukuba yeyiphi imouse abayizisayo ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Bazilungiselele iMouse yeMicrosoft ukuze babize ngaphandle kwentambo
Ukuba izibuko lokutshaja leMagic Mouse 2 alikho kwindawo efanelekileyo liyinyani. Yenzelwe ukuba ingaphuli i-aesthetics.
Ngoku: imizuzu emithathu yokutshaja yanele iiyure.
Oko sele kuyilwe ngabanye ngaphezulu kweminyaka eli-10 eyadlulayo. Ndine-2 ndisebenza ngokugqibeleleyo ukusukela ngoko, iyamangalisa kwaye intle ngokwenene.
Kubonakala kungakholeki ukuba iApple isenazo ezi ntambo kwaye ezi mveliso "zivaliweyo".
Ukulungiswa kwescreen seMacBook Pro 13, umfanekiso oqingqiweyo kaSteve nokunye okuninzi. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
Ngoku ziyafumaneka iziqendu ezi-4 zokuqala kuthotho "Ukulahlekelwa nguAlice" kwiApple TV +